Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » TATO dia mandray an-tanana ny filohan'ny Antenimieram-pirenena
Ny TATO dia mitazona ny filohan'ny antenimieram-pirenena hanohana ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany, ny tolona faharetana
Ireo mpiasan'ny fizahan-tany ao Tanzania dia niangavy tamin'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa Job Ndugai ary ny komity momba ny tetibola parlemantera mba hitarika ny governemanta handray fepetra maika hanohanana ny famerenan'ny indostria ny voka-tsiky ny virus coronavirus.
Ny mangarahara amin'ny fikirakirana ny areti-mandringana Covid-19 mba hamerenana ny fahatokisana an'izao tontolo izao dia anisan'ny olana lehibe misongadina indrindra amin'ny fihaonana manandanja eo amin'ny delegasionan'ny Association of Tour Operations (TATO) ao Tanzania, ny Mpampiresaka Ndugai ary ny komity momba ny tetibolam-bolam-panjakana natao tao Dodoma tapaky ny vao haingana.
Ny iraka TATO notarihin'ny Lehibeny, Andriamatoa Willy Chambulo dia nankany Dodoma mba handray ny mpikabary sy ny komitin'ny trano lehibe hanoro hevitra ny governemanta ny amin'ny dingana lehibe tokony hatao mba hanohanana ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahan-tany sy ny fahaizan'ny mpizahatany, ao anatin'ny areti-mandringana Covid-19.
Nilaza Andriamatoa Chambulo fa anisan'ny fizahan-tany momba ny fizahantany sy ny orinasa i Tanzania amin'izao fotoana izao raha toa ka mitazona ny toe-tsainy amin'ny fikarakarana ny areti-mandringana Covid-19 io.
"Ohatra, mangataka aminao izahay mba hanoro hevitra ny governemanta mba hampidina ny vidin'ny fitsapana PCR, hametraka ivon-toeram-panadinana bebe kokoa, hamela hopitaly sy laboratoara tsy miankina hitsapa sy hamoaka ireo mari-pankasitrahana ao anatin'ny 24 ora indrindra" hoy Andriamatoa Chambulo tamin'ny famelabelarany.
Nilaza ny delegasiona fa tsy very na inona na inona i Tanzania, ohatra, noho izy mangarahara sy manaraka ny torolalan'ny World Health Organization (WHO) toy ny fanekena ireo mpizahatany vita vaksiny.
Ny sefon'ny TATO dia nangataka tamin'ny Parlemanta ihany koa ny hanome torohevitra amin'ny governemanta mba hanomezana ny famotsoran-ketra ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany ho fanentanana azy ireo hahafahany mifantoka amin'ny famelomana indray ny orinasa.
“Mamporisika anao izahay hitarika ny governemanta hampiditra lalàna momba ny famotsoran-ketra ho an'ny mpandoa hetra isam-batan'olona sy orinasa izay tsy nahavita nanefa ny adidiny tamin'ny taona lasa noho ny Covid-19 na manana trosa hetra goavana eo am-pelatanana aorian'ny fanaraha-maso manokana nataon'ny Task Force ekipa hanome azy ireo rivotra iainana hanombohana indray ”hoy i Chambulo.
TATO dia nanolo-kevitra fa ny famotsoran-keloka amin'ny haba dia tokony hahasoa ny olona sy ny orinasa orinasa afaka mandamina ny trosany taloha amin'ny fepetra tsara ao anatin'izany ny fisorohana ny sazy izay mihoatra ny sandan'ny orinasa marobe navoaka tamin'ny tombana.
"Ny tena zava-dehibe dia manolotra volavolan-dalàna momba ny zon'ny mpamory hetra izahay hiarovana ny fanombanana navoakan'ny ekipa mpanadihady manokana momba ny hetsiky ny mpiasa manokana", hoy ihany izy.
Nangataka tamin'ny komitin'ny teti-bola parlemantera koa ny TATO mba hanala ny VAT amin'ny haba amin'ny governemanta sy ny hetra, ny fanemorana ny fampiharana ny fizahan-tany momba ny hetra na sarany vaovao, ary ny fanafoanana ny saram-pizarana ho an'ireo ankizy latsaky ny 16 taona mba hampisondrotra ny fivezivezin'ny fianakaviana.
Mikasika ny fanatsarana ny tontolon'ny asa aman-draharaha sy ny fampiasam-bola, ny TATO dia nanolotra fotoana ampy hanarahana ny olana napetraky ny masoivohon'ny governemanta sasany toy ny Fahefana misahana ny fiarovana sy ny fahasalamana (OSHA), ny National Council Management Council (NEMC), ny Tanzania Revenue Authority (TRA ) sy ny departemanta misahana ny asa noho ny zava-misy fa ny indostrian'ny fizahan-tany no tena voa mafy amin'ny fiantraikan'ny Covid-19.
“Ireo masoivohom-panjakana ireo dia mandoa onitra foana nefa tsy misy fampandrenesana na fotoana hanarenana ireo olana nipoitra. Manoro hevitra mafy izahay fa tokony hisy fotoana fahasoavana hamela ny orinasa hanamboatra ny lesoka '' hoy Andriamatoa Chambulo.
Mikasika ny fahazoan-dàlana miasa, noraisin'ny TATO fa ny antontan-taratasy ho an'ny mpampiasa vola dia tokony havaozina ho azy raha mbola mipetraka ao amin'ny firenena ny mpampiasa vola ary manao orinasa.
Ny talen'ny TATO dia nanentana ihany koa fa tokony hisy ny fampifanarahana amin'ireo fahazoan-dàlana hipetrahan'ny mponina ary tokony ho iray na folo ny tahan'ny mpiasa farafaharatsiny.
"Matotra kokoa izahay, maniry ny hahita fanatsarana ny fifandraisan'ny governemanta amin'ny lalànan'ny fifindra-monina sy ny asa," hoy izy nanamarika.
Ny delegasion'ny TATO dia nanao fanoloran-tena ho an'ny mpandahateny Ndugai ihany koa fa hiara-hiasa amin'ny parlemanterany izy mba hampahafantatra bebe kokoa ny fizahan-tany momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny ho an'ireo mpanao lalàna ary mba hisy ny synergy hanatrarana ny tanjona kendrena hahatongavana amin'ireo mpizahatany dimy tapitrisa araky ny toromarika nomen'ny Manifesto an'ny antokon'ny fitondrana.
Amin'ny lafiny iray, ny mpandahateny Ndugai dia nisaotra ny TATO amin'ny anjara andraikitra lehibe tokony horaisiny eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ary naneho ny fahavononany fa hisokatra hatrany ny tranony ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany handray anjara amin'ny ezaka hampisondrotra ny indostria amin'ny dingana manaraka.